Other ways to say "I miss you"
ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ I miss you. အစားပြောလို့ရနိုင်တဲ့အသုံးအနူန်းလေးတွေ အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like and Favorites
Todd: Natalie, let's talk about our favorite things. Natalie: Sure. Todd: First, what is your favorite color? Natalie: My favorite color is purple. Todd: Really? My favorite color is purple too. Natalie: Oh, really? Todd: Yeah, but I don't have purple clothing. I love the color purple, but I don't have purple clothes. Natalie: Oh, well, everything I wear is purple. Todd: No kidding? Natalie: Yeah, really. Todd: That's so cool. So what about food? What's your favorite food? Natalie: Good question. My favorite food is pizza. I love pizza, but I don't like really big pizzas. Todd: I love pizza too. What is your favorite topping on pizza? Natalie: I like really spicy toppings, so salami or pepperoni, chilies, and sometimes bell peppers too. Todd: Do you like thick pizza or thin pizza? Natalie: No, I don't like thick pizza, because I can't eat too much. The thin pizzas, I get lots of toppings and I don't feel so full. Todd: Yeah, I agree. What about seasons? What is your favorite season? Natalie: My favorite season is winter. Todd: Winter? Natalie: Yeah, I love winter, don't you? Todd: No, I hate winter. Why do you like winter? Natalie: I love the snow. Todd: Oh, I hate the snow. Well, I like the snowalittle bit, but I hate cold weather. Natalie: Yeah, I guess the cold is kind of annoying, but the snow is so much fun. I go skiing and I play snowball fights and I build snowmen. Todd: Yeah, that sounds fun. What about sports? What's your favorite sport? Natalie: I'd say my favorite sport is tennis. Todd: That's interesting. Do you play tennis? Natalie: Yeah, but I'm not very good. Todd: Do you like singles or doubles? Natalie: At the moment I'm having singles lessons. They're really fun. Todd: Oh, now you are taking tennis lessons? Natalie: Yes, about twiceaweek. Todd: Do you watch tennis on TV? Natalie: Yes, I watch it all the time. Todd: Who is your favorite tennis player? Natalie: I really like Roger Federer. Todd: Yeah. He's really good. Okay, last question. What is your favorite movie? Natalie: I don't haveafavorite movie, but I really like comedies. Todd: So what is your favorite comedy? Natalie: My favorite comedy is Ace Ventura. Todd: Ace Ventura is very funny, but that movie is really old. Natalie: It is, but it'saclassic, Todd. Todd: It's like 20 years old, I think, maybe more. Natalie: I know. I've seen itahundred times. Todd: Yeah. I like italot too.
Atarestaurant Jack and Suzy Jack; You've had Indian Food before, haven't you, Suzy? မင်းအိန္ဒိယအစားအစာ စာဖူးတယ်နော်။ မဟုတ်ဘူးလား ဆူဇီ။ Suzy; No, I haven't. It's very hot and spicy, isn't it? ဟင့်အင်။ ကျွန်မမစားဖူးပါဘူး။ အဲ့ဒါက အရမ်းပူပြီးစပ်တယ်နော်။ မဟုတ်ဘူးလား။ Jack; Some of it is. India's very big country, so there arealot of different kind of foods. တချို့ကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ အန္ဒိယကအရမ်းကြီးတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒါကြောင့် အစားအစာမျိုးစုံပေါများပါတယ်။ Suzy; I don't mind spicy food. What do you recommend? ကျွန်မ က စပ်တဲ့အစားအစာတွေဆိုလဲအဆင်ပြေပါတယ်။ ဘယ်တစ်ခုကို စားကြည့်စေချင်လဲ။ Jack; Well, there is the Chicken Kashmiri. Chicken Kashmiri ဆိုတဲ့အစားအစာတော့ရှိတယ်။ Jack; That's chicken inamild and creamy sauce. အဲ့ဒါက ဆော့နဲ့ကြက်သားကိုချက်ထားတာပါ။ Jack; The sauce is made with pineapples and bananas, so it's quite sweet, too. အဲ့ဒီဆော့က နာနတ်သီးနဲ့ငှက်ပျောသီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့်အရမ်းလဲချိုပါတယ်။ Suzy; No, I'm not very fond of bananas. ဟင့်အင်။ ကျွန်မ ငှက်ပျောသီးသိပ်မကြိုက်ဘူး။
How to increase your vocabulary အခုပြောပြပေးမည့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ ကို တကယ်တိုးတက်ချင်သူတွေအတွက်အမှန်တကယ် အလုပ်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေဟာ သဒ္ဒါ ကိုလေ့လာပြီးချိန်ပြီးမှာ စာကြောင်းတည်ဆောက်မှုပုံစံတွေမှန်ကန်သွားပေမယ့် စကားလုံး ဝေါဟာရ အားနည်းမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်တတ်ကြရပါတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို ထိမိအောင် သဒ္ဒါနည်းလမ်းကျဖို့တင်မက စကားလုံး၊ ဝေါဟာရ ပေါကြွယ်ဝစွာသုံးနိုင်ဖို့လဲအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဝေါဟာရကြွယ်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေကို စကားလုံးပေါကြွယ်ဝအောင် စာများများဖတ်ပါလို့ အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်ပါ လို့တိုက်တွန်းရတာဟာလဲ သုံးနေကျ ဟောင်းအိုနေတဲ့စကားကို ထပ်ထပ်သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရာမထင်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်ပါ လို့ပြောရတာထက် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုဖတ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားတဲ့ ကိုယ့်ဖတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို့ရေးသားထားတဲ့ ရုပ်ရှင်အညွန်းတွေကိုဖတ်ပါ။ ဒါကတော့ ပိုအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဟာဝတၳုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဝတၳုကိုဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ များများရေးပါ။ စာဖတ်ရုံတင်မကပါဘူး။ ဖတ်ဖူးတဲ့စာကို မှတ်သားဖို့လဲလိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေမှာ အနည်းဆုံးတော့ မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟောဝါရပေါကြွယ်စေဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာ မှတ်စုစာအုပ်ထဲ ချရေးတတ်တဲ့အကျင့်ဟာလဲ တစ်နည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်ဖတ်ထားဖူးတဲ့စာအုပ်ထဲက စာကြောင်းလေးကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Text message ပို့တဲ့အခါ အပျော်တမ်း Facebook status တင်တဲ့အခါမှာသုံးကြည့်ပါ။ ဒီနည်းကိုတော့ ကိုယ်ဖတ်ထားဖူးတဲ့စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာ Apply လုပ်တယ် ပြန်အသုံးချတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဖတ်ဖူးတဲ့စာကို လက်တွေ့ပြန်အသုံးချမှ မှတ်မိတာဖြစ်ပါတယ်။ အတွေးများကိုဖြန့်ကျက်ပါ စကားလုံးအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါ အဲ့ဒီစကားလုံးမှာတင်ရပ်မနေဘဲ သူ့ရဲ့ရှိသမျှပုံစံတွေကိုလေ့လာပါ။ ဥပမာ Beautiful ဆိုပါတော့။ သူက adj ပါ။ beautiful ဟာ adj အပြင်နောက်ထပ် ဘယ်လိုပုံစံတွေရှိနိုင်သေးလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုဖြန့်ကျက်ပါ။ သူ့မှာ noun ရှိဦးမလား၊ verb ရှိဦးမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုထပ်ဆင့်ပွားပြီး လေ့လာပါ။ Crazy အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေကို အကောင်းဆုံးအကြံပြုချင်တာက ရူးသွပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တတ်မြောက်လိုတဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခုအပေါ်မှာ ရူးသွပ်မှ အတတ်မြန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဝေါဟာရကြွယ်ဝဖို့ဆိုရင် စကားလုံးအသစ်အဆန်းတွေကို ထိတွေ့ဖို့ကြောက်မနေဘဲ ပိုပိုလေ့လာပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့လက်တစ်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့ ကော်ဖီမစ်မှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကအစ တကယ့်ပညာရှင်တွေရေးသားထားတဲ့စာတွေအထိ အင်္ဂလိပ်စာလုံး ပါနေတဲ့စာတိုင်းကို ရူးသွပ်စွာဖတ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လာသမျှ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကို ကိုယ်အပိုင်ဖြစ်လာအောင် ရူးသွပ်စွာ ကြိုးစားကြည့်ရအောင်ပါနော်။
After School Activities John; Will you play any sports this school year? ဒီနှစ် ကျောင်းအားကစားမှာပါမှာလား Suzy; I want to play hockey. But I'm not sure if I will have enough time. ငါ ဟော်ကီကစားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါအချိန်ရပါ့မလားမသေချာဘူး။ John;I'm on the school soccer team. I'm also going to take up swimming. ငါ ကျောင်းဘောလုံးပွဲမှာ ကစားမလို့။ ရေကူးလဲသင်တော့မယ်။ Suzy; You're going to be on the soccer team and swim, too? မင်းက ဘောလုံးအသင်းမှာလဲပါမယ်၊ ရေကူးအသင်လဲပါမယ်ပေါ့။ John;Yeah. ဟုတ်ပါတယ်။ Suzy; That seems likealot. You will be very busy! Do you think you will have any free time? ဒါက သိပ်များတဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်။ မင်းတော့အရမ်းအလုပ်များလိမ့်မယ်။ မင်းမှာအားချိန်ရှိမယ်လို့ရောထင်လား။ John; I will play soccer with my school team during the week. I will go swimming during the weekend. ငါ ကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ ကျောင်းဘောလုံးအသင်းမှာကစားမယ်။ ပိတ်ရက်မှာတော့ ရေကူးမယ်။ Suzy; When will you have time to do your homework? And when will you study? အိမ်စာလုပ်ဖို့အချိန်မင်းအချိန်ရှိလိမ့်မလဲ။ ပြီးတော့ မင်းဘယ်အချိန်စာလေ့လာမှာလဲ။ John; I do my homework after school every day. I study ever weekend. My mother won't let me play sprots until I have done all my work. ငါ ကျောင်းအပြန်နေ့တိုင်းအိမ်စာလုပ်တယ်။ ပိတ်ရက်တိုင်း စာလေ့လာတယ်။ ငါ့အမေက ငါ့အလုပ်တွေမပြီးရင်အိမ်ပြန်ခွင့်မပြုဘူး။ Suzy; Well, I hope you find enough time for both schoolwork and sports. Goo Luck! ကောင်းပါပြီ။ ကျောင်းစာနဲ့အားကစားနှစ်ခုလုံးအတွက် အချိန်လုံလောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ။
Sort of & Kind of Sort of နဲ့ kind of စကားလုံးနှစ်ခု native speaker တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ (သို့) အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကြားရလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်ခု စာကြောင်းတွေ ဘယ်လို ကွဲလွဲအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကနေ ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကနေ I'm kind of hungry. မြန်မာလိုကတော့ ကျွန်တော်ဗိုက်သိပ်မဆာဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ kind of ၊ sort of ရဲ့အဓိပ္ပာယ် က အတိအကျတော့မဟုတ်ပေမယ့် အများကြီးမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်နည်းနည်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ I'm kind of hungry. ကျွန်တော် ဗိုက်အများကြီး ဆာတာမဟုတ်ဘူး နည်းနည်းဆာတယ် ဒီလိုသဘောပါ။ He's kind of crazy. သူကနည်းနည်းတော့ရူးတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတကယ် အတိအကျရူးနေတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ရူးတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ sort of ၊ kind of သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာစကားပြောသူနည်းနည်း အပျော် စနောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် ပြောလိုက်ခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို He's crazy။ သူကရူးနေတာ လို့တန်းပြောခြင်းက မယဉ်ကျေးပါဘူး။ ရင်းနှီးနေသူတွေအတွက်သာအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါကြောင့် အဓိပ္ပာယ်ကို နည်းနည်း ဖော့သွားအောင် He's kind of crazy. သူကနည်းနည်းတော့ရူးတယ် လို့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ sort of နဲ့ kind of ရဲ့နောက်မှာ adj (သို့) noun လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ We're kind of lost. ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးကို ဥပမာပေးရမယ် ဆိုရင် ကိုယ်မသိတဲ့ နေရာတွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားလည်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့အတူပါမလာတဲ့သူက လမ်းမေးမယ် မင်းတို့ဘယ်ရောက်နေကြပြီလဲ။ ဘာညာပေါ့နော်။ကိုယ်သွားနေတဲ့နေရာက တစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူး။ အဆင်ပြေသလို ရှောက်သွားနေပြီတော့ ဘယ်နေရာဆိုတာ ကိုယ်လဲမပြောတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာ We're kind of lost. လို့သုံးပါတယ်။ ငါတို့ဘယ်ရောက်နေလဲတောင်မသိဘူး။ ခပ်နောက်နောက်ပြောတာမျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပျောက်ပြီး ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိတော့တာမဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကို ဖော့သွားအောင် သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ She's kind of important. သူမက နည်းနည်းတော့အရေးပါတယ်။ ဒီစကားလုံးနှစ်ခု ကို စကားပြောတွေမှာမြန်မြန်ပြောတဲ့အခါ soda , kinda ဆော့ဒါ။ ကိုင်းဒါ လို့ထွက်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။
4 ways to order inaRestaurant
စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုကိုထိုင်တဲ့အခါ အရိုးစင်းဆုံး မှာကြားနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်အသုံးအနူန်းတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1 I'd like---- ပုံမှန်အားဖြင့် တော့ I'd like ---- ဆိုတာက I would like ----- ပါပဲ။ I'd like the cheesecake, please. ချိစ်ကိတ်ရမလား I'd likeahamburger. ဟမ်ဘာဂါရမလား I'd like coffee. ကော်ဖီရမလား ဒီလိုအသုံးတွေက ရိုးစင်းပြီး လက်တွေ့မှာလဲ သုံးနေကြစကားတွေဖြစ်ပါတယ်။2I'm gonna have ----- I'm gonna have the salad. ကျွန်မ အသုတ်စားမယ်။ ဒီစကားလုံးက I'm going to have လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသတိပြုရမှာက I'm gonna have ရဲ့နောက် ကိုယ်မှာတော့မယ့်အစားအစာရဲ့ရှေ့မှာ the ကိုထည့်သုံးပါတယ်။ I'm gonna have the hamburger. ကျွန်မ ဟမ်ဘာဂါစားမယ် နောက်တစ်ခါ I'll have လို့လဲသုံးရပါတယ်။ ကိုယ်က menu ကကြည့်ပြီးမှာမယ်ဆိုရင် I'll have the No.2. ကျွန်မ နံပါတ်၂ က တစ်ခုစားမယ်။ I'll have the hamburger with french fries. ကျွန်မ အားလူချောင်းကြော်နဲ့ဟမ်ဘာဂါစားမယ် ကိုယ်မှာတဲ့အစားအစာရဲ့ရှေ့မှာတော့ the ကိုထည့်သုံးတယ်ဆိုတာသတိပြုရပါမယ်။3I'm going to take ----- I'll take ---- နောက်တစ်ခါအစားအသောက်တွေမှာတဲ့အခါ သုံးနိူင်တဲ့စကားလုံးက take ဖြစ်ပါတယ်။ I'm going to take the hamburger. ကျွန်မ ဘမ်ဘာဂါစားမယ် I'll take the coffee. ကျွန်မကော်ဖီသောက်မယ် I'll take the salad. ကျွန်မအသုတ်စားမယ်။ နောက်ထပ် အသုံးတစ်ခုကတော့4I'm gonna go with ---- ဖြစ်ပါတယ်။ I'm gonna go with the salad. ကျွန်မအသုတ်စားမယ် I'm gonna go with the grilled chicken. ကျွန်မ ကြက်ကင်စားမယ် I'm gonna go with the salmon sushi. ကျွန်မ ဆော်လမွန်ဆူဆီစားမယ် gonna go ဆိုလို့ အဲ့ဒီအစားအစာတွေနဲ့သွားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ယူလို့မရပါဘူး။ ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ် မှုပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ အခုပြောပြခဲ့တဲ့အသုံးအနူန်းတွေထဲကကိုယ် ကြိုက်နှစ်တဲ့တစ်ခုနဲ့ comment မှာ ကိုယ်စားချင်တာကိုမှာတဲ့ပုံစံလေးရေးပေးခဲ့ပါနော်။
Get Get ကိုမြန်မာလို ရရှိသည်၊ ရောက်ရှိသည် လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာ အမြဲလို get တို့ got တို့သုံးနေကြတာကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေအနေနဲ့ get ကိုဘယ်လိုသုံးကြလဲ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ သုံးကြလဲဆိုတာကတော့ နည်းနည်းရူပ်ထွေးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် You are not alone ပါ။ get အသုံးပြုမှုကို သိပ်မရှင်းကြတာ လူပေါင်း၊ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ နေ့စဉ်သုံးစကားပြောတွေမှာ အသုံးများတဲ့ Get အသုံးမှုကို ပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စာကြောင်းတွေမှာတခြားသော get အသုံးပြုမှုတွေလဲရှိနိုင်ပေမယ့် အသုံးများပြီးလွယ်ကူတဲ့ get အသုံးပြုမှု6ခုကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ I got eight hours of sleep last night. မနေ့ညက ငါ ၈ နာရီအိပ်ခဲ့တယ်။ ဥပမာ ငါအရမ်းပင်ပန်းနေပြီ မနေ့ညက ငါ ၃ နာရီပဲအိပ်ခဲ့ရတာ I'm so tired. I only got three hours of sleep last night. အိပ်စက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် get တို့ got တို့သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးမှတ်ထားရပါမယ်။ I only got three hours of sleep last night. I hope that I can get eight hours of sleep tonight. မနေ့က ငါ သုံးနာရီပဲအိပ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီညတော့ ငါ ၈ နာရီအိပ်လို့ရနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အသုံးလေးက get distracted by social media လူမှုကွန်ယက် မှာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ I get distracted by Facebook because people on FB give rude comments. ဖေ့ဘုတ်သုံးလို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖေဘုတ်ပေါ်က လူတွေက ရိုင်းစိုင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးကြလို့ပါ။ Get နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်မှာဆက်ထည့်လို့ရတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ I got bored. ငါပျင်းလာခဲ့သည်။ I'm getting hungry. ငါဗိုက်ဆာလာသည်။ နောက်ထပ် getကိုသုံးနိုင်တဲ့ဝါကျကတော့ I got home at 8 pm last night. ငါမနေ့ညက အိမ်ကို ၈ နာရီမှရောက်တယ်။ He got home at5pm every day. သူနေ့တိုင်း ၅ နာရီဆိုအိမ်ရောက်တယ်။ ကိုယ်က ကျောင်းသွားမယ်၊ ရုံးသွားမယ်၊ တစ်ခုခု လုပ်နေရာကနေ အိမ်ကို တိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုခုမှာရောက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာသုံးနိုင်သလို၊ When are you going to get home? အိမ်ကိုဘယ်အချိန်ပြန်မှာလဲ။ What happened last night when you get home? မနေ့က မင်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ စသဖြင့် get home ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Get back - ပြန်ရောက် ဒီအသုံးကိုလဲ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ I got back from vacation yesterday, but I'm still tired. မနေ့ကခရီးကပြန်ရောက်တယ် ဒါပေမယ့်အခုထိပင်ပန်းနေတုန်းပဲ။ What are you doing? မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ။ I just get back from school. ကျောင်းကပြန်လာရုံရှိပါသေးတယ်။ Get back from work, get back from တစ်နေရာရာပေါ့နော် ကိုယ်ရောက်ခဲ့တဲ့တစ်နေရာရာကနေ ပြန်ရောက်လာတာ။ သူငယ်ချင်းအိမ်လဲ ဖြစ်မယ်၊ အလည်သွားတဲ့နေရာ တစ်ခုခုလဲဖြစ်မယ်။ I got back from the concert late. ပွဲကနောက်ကျမှပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ don't get why- နားမလည်နိုင် တစ်ခုခု ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးနေရလဲနားမလည်တော့ဘူး။ ဆရာမ စာရှင်းပြတာ လိုက်မမှီဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးစတဲ့ အခြေအနေတွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ don't get why ပြီးတော့နောက်ကတစ်ခုခုဆက်ရေးပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ I don't get why this is popular. I don't get why you didn't like the tv show. မင်းတီဗွီရှိုးကိုဘာကြောင့်မကြိုက်ခဲ့လဲနားမလည်တော့ပါဘူး။ I don't get what do you say မင်းဘာပြောခဲ့လဲ ငါနားမလည်လိုက်ဘူး။ စသဖြင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ get together ဒီအသုံးအနူန်းကတော့ တွေ့ကြရအောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ I want to see you. I want to visit you နဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒီစကားလုံးကတော့နေ့စဉ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စကားပြောတွေမှာသုံးကြတာပါ။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်းဆိုတာ get together လေးစမ်းသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။ Let's get together at5o'clock. ငါးနာရီလောက်တွေ့ကြရအောင် Let's get together next month. နောက်လကျတွေ့ရအောင် ဒါမှမဟုတ် I can't get together,I'm sorry. ငါမတွေ့နိုင်ဘူး။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ အခုပြောပြသွားခဲဲ့တဲ့ get အသုံးအနူန်းတွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကိုသုံးပြီး comment ပေးခဲ့ပါနော်။
Housewarming Party Suzy; Hi, John. Thanks for coming to my housewarming party. ဟိုင်း ဂျွန်။ အိမ်တက်ကိုလာရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ John; Hello, Suzy! Thanks for inviting me to see your lovely new home, It's beautiful! ဟယ်လိုဆူဇီ။ ချစ်စရာအိမ်အသစ်လေးကိုတွေ့ရဖို့ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကသိပ်လှတာပဲ။ Suzy; Thank you. I'm glad you like it. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်မဝမ်းသာပါတယ်။ John; Did you decorate your house all by yourself? မင်းရဲ့အိမ်ကို ကိုယ်ဘာသာပြင်ဆင်တာလား။ Suzy; Yes, I did. I traveled around Europe last year. I got some beautiful furniture for my house there. ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျွန်မ ဥရောပကို သွားလည်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မအိမ်အတွက်အဲ့ဒီကနေ လှပတဲ့ပရိဘောဂတွေရခဲ့ပါတယ်။ John; Do you plan to go onanew trip this summer? ဒီနှစ်နွေရာသီ ခရီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလား။ Suzy; Yes, I am planning to visit China. ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ တရုတ်ကိုသွားလည်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ John; That's great! How long will you be there? ဒါသိပ်မိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာမင်းဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။ Suzy; I will be there foramonth. ကျွန်မအဲ့ဒီမှာ တစ်လကြာလောက်ရှိနေမှာပါ။ John; You can find some beautiful things in China for your new house. You should go shopping while you are there. တရုတ်မှာ မင်းအိမ်အသစ်အတွက် လှပတဲ့အရာတွေ မင်းတွေ့ရနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီမှာရှိနေတုန်းမင်းဈေးဝယ်ထွက်သင့်တယ်။ Suzy; Of course! It will be fun to go shopping there. By the way, please help yourself to the refreshments. ဒါပေါ့။ အဲ့ဒီမှာဈေးဝယ်ထွက်ဖို့သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းမှာပဲ။ ဒါနဲ့စကားမစပ် စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ကိုယ့်အိမ်ကို သဘောထားစားပါနော်။ John; Thanks. The food looks delicious. ကျေးဇူးပါ။ အစားအသောက်တွေကကောင်းမယ့်ပုံပဲ။
Vocabulary Instead of Very (2)
Vocabulary Instead of Very2ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ very အစားသုံးနိုင်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတုန်းက very good လို့ပြောမယ့်အစား great လို့စကားလုံးတည်းတဲ့အစားထိုး သုံးပြသွားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ ကိုယ်က very beautiful လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုကိုပြောချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်မေ့နေတယ်ဆိုပါစို့။ ကိုယ်က Beautiful ကိုပဲဆက်သုံးလို့အိုကေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် very အစား တခြားလှတဲ့စကားလုံးလေးတွေအစားထိုနိုင်ပါတယ်။ Extremely You're looking extremely beautiful. အိုမိုင်ဂေါ့ ဘေဘီ အရမ်းကိုလှနေပါပြီတို့ဘာတို့။အရမ်းကိုလှနေတယ်လို့ ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Awfully It's awfully cold. very cold အစား awfully cold လို့သုံးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ Super Super ကတော့ စကားပြောတွေမှာအများဆုံးသုံးကြပါတယ်။ You're super cute. super nice. super friendly. နောက်တစ်ခါ Terribly Terribly က ရိုးရိုးဝါကျမှာတော့ အငြင်းဝါကျမှာရော သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ You're terribly nice guy. It's terribly hot. စသဖြင့် very နေရာမှာ သုံးလို့ရတာလေးတွေကို မှတ်ထားပြီး ကိုယ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့လေ့လာခဲ့ကြတာကတော့ very အစားသုံးလို့ရတဲ့စကားလုံးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။